नर्स सावित्री भट्टराईको कोरोना संक्रमणबाट दुखद निधन भएपछी आफन्तले लेखेको स्टाटसले सबैलाई रुवायो ! – Classic Khabar
May 18, 2021 106
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नर्स सावित्री भट्टराईको निधन भएको छ । नेपाल नर्सिङ संघकी कोषाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले जेष्ठ २ गते नर्स भट्टराईको निधन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँ पछिल्लो समय विराटनगर नोवेल हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो सावित्री भट्टराईको नि’धनको खबरले उनका साथी र आफन्तहरुले निकै भाबुक श’ब्दहरु शेयर गरेका छन् ।
उनको तस्बिर राख्दै लेखिएको छ – छोरी आज तिमीले यो संसारलाई छोडेर गयै । तिमी हाम्रो नजरबाट मे’टिए पनि हाम्रो हिृ’दयबाट कहिल्यै मेटिने छैनऊ | यस्तै नर्स चुनीमैंया श्रेष्ठको वैशाख २९ गते हृदयघातका कारण निधन भएको छ । श्रेष्ठ नर्सिङ संघ शाखा पाल्पा संस्थापक सचिव हुनुन्थ्यो ।संघले दुवै नर्सको निधनप्रति दुख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदन व्यक्त गरेको छ ।
यो पनि, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट बनाउन भक्तपुरका तीन अस्पताललाई आठ करोड – कोभिड–१९ को दोश्रो लहरको महामारीमा भक्तपुरमा कोभिड सङ्क्रमितको उपचार गर्ने दुई अस्पताल र नयाँ बन्दै गरेको अस्पताललाई सरकारले रु. ८ करोड एक लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य क्षेत्र द्रुत कार्ययोजना अन्र्तगत अस्पतालमा आवश्यक भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्क बनाउन सो रकम दिने भएको हो ।
Prevआज ४ गतेका मुख्य समाचार- रबि भगवान बने,काठमाडौंका कुन कुन अस्पतालमा खाली छन् आईसीयू र भेन्टिलेटर ?
Nextपरपुरुषसंग सम्बन्ध रहेको आशंकामा विदेशवाट आएको एक सातामै २४ वर्षकी श्रीमतीलाई सिध्याए (भिडियो हेर्नुस्)
दरवार ह त्याकाण्ड पछी कहाँ छन राजा बिरेन्द्रका दुइ नातीनिहरु ? गुमनाम किन छन ? खुल्यो रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस)